WordPress: Re कारण अब Jetpack स्थापना गर्न! | Martech Zone
WordPress: स्थापना गर्न Re कारणहरू jetpack अब!
बुधबार, डिसेम्बर 4, 2013 बिहीबार, जुलाई 9, 2015 Douglas Karr
पछिल्लो रात मलाई पाहुना हुन खुशी थियो #atomicchat ट्विटर च्याट मा अविश्वसनीय मान्छे द्वारा संचालित आणविक पहुँच। हामी वर्डप्रेसको लागि महान प्लगइनहरू छलफल गर्दै थियौं र एक प्लगइन जुन मैले केहि समय ल्याउनुपर्‍यो jetpack.
जेटप्याक तपाईको सेल्फ-होस्ट गरिएको वर्डप्रेस साइटलाई WordPress.com को अद्भुत क्लाउड पावरको साथ सुपरचार्ज गर्दछ।
तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ jetpack अतिरिक्त विवरणहरूको लागि WordPress साइटको लागि, तर key प्रमुख सुविधाहरू मेरो लागि बाहिर खडा छ:
यदि तपाइँ मोबाइल साइटमा तपाइँको साइट राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्न भने, तपाइँका धेरै आगन्तुकहरू तपाइँलाई सम्भवतः बेलि .्ग गर्न सम्भव छ। राम्रो समाचार यो हो कि तपाइँले नयाँ उत्तरदायी थिम वा मोबाइल एड-अनमा एक टन पैसा खर्च गर्नुपर्दैन, वर्डप्रेसले तपाइँले एक राम्रो, हल्का मोबाइल विषयवस्तुलाई कभर गर्नुभयो जुन बक्स बाहिर शानदार काम गर्दछ।
यदि मलाई कुनै गुनासो भएमा, यो हुन सक्छ कि थिम वास्तवमा एक थिम डाइरेक्टरीमा बचत गरिएको छैन - त्यसैले यदि तपाईं कुनै संशोधन गर्नुहुन्छ भने, प्लगइन अपडेट गर्नाले तिनीहरूलाई मेटाउनेछ। थप रूपमा, आईट्यून्स जस्ता मोबाइल अनुप्रयोग प्लेटफर्महरूले मेटा डेटा प्रस्ताव गर्दछ जुन साइटको अनुप्रयोगको लागि स्थापना बटन पप अप गर्दछ। यो प्लगइनका लागि यो एक उत्तम सुविधा हुनेछ।
On Martech Zone, हामी कोटिहरूमा आधारित कार्य गर्न डायनामिक कलहरू छन्। यदि तपाइँ एक सोशल मिडिया लेख पढ्नुहुन्छ भने, साइडबारले प्रायोजकबाट कार्य गर्न सोशल मिडिया कल प्रदर्शन गर्दछ। यो एकदम राम्रोसँग काम गर्यो तर यसको लागि हामीले आफ्नै प्लगइनलाई प्रोग्राम गर्नु आवश्यक पर्‍यो। आब नाई! jetpack एक संग आउछ दृश्यात्मक विकल्पले तपाईंलाई जटिल नियमहरू सेट अप गर्न अनुमति दिँदछ जब निर्दिष्ट विजेट कहिले प्रदर्शन गर्ने।
तपाइँको सामग्री को सामाजिक पदोन्नति अब एक विकल्प छैन, यो एक समग्र रणनीति मा महत्वपूर्ण छ। WordPress ले यो चुनौतीको समाधान गर्‍यो तपाईंको सामाजिक नेटवर्कमा तपाईंको पोष्टहरू सार्वजनिक गर्न सक्ने क्षमता थपेर। म उनीहरूलाई Google+ थप्नको लागि उत्सुक छु र सम्भवतः हाम्रो आफ्नै ब्ल्ग यस प्लगइनमा रूपान्तरित हुनेछ जतिसक्दो चाँडो यो थपिएपछि। हामी हाल प्रयोग गर्दछौं WordPress लाई बफर प्लगइन र बफर हाम्रो पोस्ट साझा गर्न।
सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संग jetpack कि यो WordPress मा मूल हो र WordPress डेवलपर्स द्वारा निर्मित। बजारमा धेरै प्लगइनहरूको गुणवत्ता दिईएको छ, यो विश्वसनीय स्रोतको लागि यो उत्कृष्ट छ! स्थापना गर्नुहोस् jetpack अब र यी सुविधाहरूको लाभ लिनुहोस् र धेरै, धेरै अरू!
टैग: गतिशील विजेटमोबाइल थिमतथ्याङ्कदृश्यात्मकविजेटWordPress प्लगइन
पोकेन: कर्पोरेट घटनाक्रम मा बुस्ट नेटवर्किंग